Ụlọ ọrụ ahụ mere mmemme mmeghe nke ọzụzụ ndị ọrụ ọhụrụ na 2021
N'ehihie nke Ọgọst 20, 2021, ụlọ ọrụ ahụ mere emume mmeghe ọzụzụ ndị ọrụ n'ime ụlọ ọgbakọ 312. Fang Jiaqin, onye isi njikwa Li Dong, Qi Jifei, osote onye isi njikwa, ndị isi ngalaba dị iche iche, ndị ọrụ ọhụrụ ...
Igodo iji dozie mkpọtụ asaa dị n'ime sekit(7)
7. Mkpọtụ nke sekit agbakwunyere E nwere ụdị abụọ nke nnyonye anya ụda na sekit agbakwunyere: otu na-egbuke egbuke na nke ọzọ na-eduzi. Mkpọtụ mkpọtụ ndị a nwere ike inwe nnukwu mmetụta na ngwaọrụ eletrọnịkị ndị ọzọ ejikọrọ na otu grid AC. A na-agbatị ụdị mkpọtụ ahụ ruo ihe karịrị 1...
Igodo iji dozie mkpọtụ asaa dị n'ime sekit (6)
6. Ụda nke onye na-eguzogide ihe mgbochi nke onye na-emegide ya na-abịa site na inductance na resistor, mmetụta capacitive, na ụda okpomọkụ nke resistor n'onwe ya. Dịka ọmụmaatụ, ihe mgbochi isi siri ike nke nwere uru nguzogide nke R nwere ike ịha nhata na njikọ yiri usoro nke resistor ...
Igodo iji dozie mkpọtụ asaa dị n'ime sekit (5)
5. mkpọtụ transistor bụ mkpọtụ nke transistor na-agụnyekarị mkpọtụ ọkụ, mkpọtụ egbe, na mkpọtụ na-egbuke egbuke. Mkpọtụ ọkụ na-eme ka ụda ọkụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma nke ndị na-ebu ya na-agafe na-eguzogide anụ ahụ nke mpaghara atọ dị na BJT na nkwụsị nkwụsị kwekọrọ. Nke...
Igodo iji dozie mkpọtụ asaa dị n'ime sekit (4)
4. Ntinye aka nke ihe electromagnetic na bọọdụ sekit Ọtụtụ bọọdụ sekit nwere ihe elektrọn magnetik dị ka relays na coils. Mgbe ihe dị ugbu a na-agafe, inductance nke eriri igwe na ikesa nkesa nke mkpuchi dị n'èzí na-amụba ike na gburugburu, na ume ...
Igodo iji dozie mkpọtụ asaa dị n'ime sekit (3)
3. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ dị elu na-eme ka ụda ọkụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka electrons dị n'ime onye nduzi. Ka okpomọkụ dị elu, otú ahụ ka mmegharị eletrọnịkị ga-esiwanye ike. Ntugharị nke electrons n'ime onye nduzi na-emepụta ọtụtụ obere mgbanwe ugbu a ...
Igodo iji dozie mkpọtụ asaa dị n'ime sekit (2)
2. Mkpọ ụda na-emepụta site na ngwaọrụ semiconductor Ọnụ ego a na-anakọta na mpaghara a na-agbanwe n'ihi mgbanwe nke voltaji nke mpaghara mgbochi n'ofe semiconductor PN junction, si otú ahụ na-egosipụta mmetụta capacitive. Mgbe etinyere voltaji na-aga n'ihu na-ebili, electrons na th ...
Igodo iji dozie mkpọtụ asaa dị n'ime sekit (1)
1. Mkpọtụ ụda ugboro ole dị ala na-abụkarị ihe na-akpata nkwụsị nke ihe ndị na-eme ihe n'ime. Karịsịa, ihe na-egbochi ihe nkiri carbon nwere ọtụtụ obere ihe dị n'ime ihe carbonaceous, na ihe ndị ahụ na-akwụsị. Mgbe nke ugbu a na-aga, ọkụ eletrik ...
Igodo iji dozie ụda isi asaa n'ime sekit
Nhazi sekit bụ isi ihe na-arụ ọrụ dị elu nke ihe mmetụta. Ebe ọ bụ na mmepụta nke ihe mmetụta bụ obere mgbaàmà, ma ọ bụrụ na mgbaàmà bara uru na-ejupụta na ụda, ọ gaghị abụ ihe efu, n'ihi ya, ọ dị mkpa karịsịa iji wusie ike mgbochi jamming nke sekit sensọ. ...
Usoro iwu: smart sensọ ụlọ ọrụ ga-ewebata ntuziaka omume afọ atọ
N'ọkwa nke atumatu, GuoYuansheng webatara na "atụmatụ afọ ise nke iri na atọ" edepụtala ihe mmetụta dị elu dịka atụmatụ mmepe mmepe. Na-esote, Ministry of Industry and Information Technology "Smart Sensor Industry Action Action Guide (2017-2019)" ga-ewebata ngwa ngwa ...
Ego MediaTek na-enweta kwa afọ ga-akarị ijeri dollar 10 maka oge mbụ na 2020
Onye isi oche MediaTek Cai Mingjie nwetara onyinye onyinye onyinye pụrụ iche maka ncheta afọ 40 nke Zhuke. N'okwu ya, Tsai Mingjie kwuru na ncheta afọ 40 nke ntọala Zhuke, bụ nke Zhuke chere ihe ịma aka dị iche iche ihu, ka ọ na-erule afọ a, semiconducto Taiwan nke China ...
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke sensọ na ụgbọ ala na-akwọ ụgbọ ala Apple
Na Nọvemba 11, 2020, ekpughere mgbawa M1 nke Apple mebere onwe ya. M1 mgbawa a bụ ihe ịrịba ama nke mgbasawanye Apple site na mpaghara ekwentị na mpaghara ndị ọzọ na-abụghị ekwentị mkpanaaka. Enwere ike iji mgbawa a na kokpiiti ụgbọ ala yana ịnya ụgbọ ala na-enweghị onye nwere ntakịrị mgbanwe. Apple nwere ...
Mmetụta Ụlọ Nzukọ ugbu a sensọ, Mmetụta Ụlọ Nzukọ Ac ihe mmetụta ugbu a, Ihe mmetụta dị ugbu a Ac dị elu, Ihe mmetụta Ụlọ Nzukọ ugbu a, Oriri ike dị ala Dc ihe mmetụta ugbu a, Ihe mmetụta voltaji ugbu a,